Motorola dia mamoaka ny Moto G 2015 vaovao amin'ny kinova roa | Androidsis
Motorola dia manolotra ny efijery Moto G 2015: 5 ″, fakan-tsary Snapdragon 410 ary 13MP
Motorola nampahafantatra antsika androany ny modely vaovao de izy ireo dia hanome ny ady mety hitranga rehetra mandritra ny volana maromaro miaraka amin'ireo fitaovana mifanaraka amin'ny filan'ny mpampiasa maro, izay aleony mampiasa telefaona misy endri-javatra tena tsara nefa amin'ny vidiny mirary tokoa.
Ny moto G no kintana tamin'ny hetsika Motorola. Ny kinova 2015 an'ny fitaovana afovoany Motorola dia fifangaroana taloha sy vaovao, ary izany mitazona ny ampahany sasany amin'ny telefaona mandritra ny fanavaozana ny hafa tena zava-dehibe. Ny fanontana 2015 an'ny Moto G dia manana kinova roa izay manome iray RAM 1 GB bebe kokoa ary manana fitehirizana bebe kokoa, ankoatran'ny fakan-tsary 13 megapixel izay manatsara izay hita teo amin'ny fanontana teo aloha.
1 Moto G2015
Ny Moto G 2015 Izy io dia manana ny efijery 5p 720-inch mitovy amin'ny famahana ho an'ny fanontana 2015Saingy havaozina ao anaty vavony izy io miaraka amina processeur 410-bit Qualcomm Snapdragon 64 ary fakan-tsary 13 MP ao aoriana, fakan-tsary mitovy amin'ny Nexus 6.
Ny maodely rehetra dia mahazo fanoherana rano IPX7 (hatramin'ny iray metatra mandritra ny 30 minitra), ny fifandraisana LTE ary ny bateria 2470mAh. Hisy maodely roa, ny iray misy RAM 1GB sy fitehirizana 8GB ary iray lehibe kokoa miaraka amin'ny RAM 2GB sy fahatsiarovana anatiny 16GB. Samy hampiasa microSD izy roa mba hahafahanao mampitombo azy be raha tianao. Ny iray amin'ireo hatsarana izay raisin'izy roa tonta dia ny «turbo» haingana.
Ny rindrambaiko ananany dia Android 5.1 ary toy ny tamin'ny fanontana teo aloha, dia azo vidiana amin'ny tranonkalan'ny Motorola manokana.
Ny "fijery" an'ny Moto G 2015 dia manaraka ny masontsivana hita ho an'ny maodely andiany Moto amin'ity taona ity miaraka amina bara mitsangana eo afovoany, somary mampatsiahy ny zavatra hita tamin'ny HTC One, ary izay manatevin-daharana ny sary famantarana sy ny fakantsary. Ny zoro sy ny lamosina dia misy vy.
Ny loko mahazatra dia mainty sy fotsy, fa ny Motor G kosa dia ho afaka hiditra amin'ny fitaovana Moto Maker hanamboarana ny telefaona amin'ny faritra sasany araka izay tadiavintsika. Ny vidiny mivoaka anio dia € 199 amin'ny kinova 1GB / 8GB, ary araka ny lazain'i Motorola dia ampahatelon'ny avo lenta amin'ireo mpamokatra isan-karazany izy io.
Una filokana tena tsara avy amin'i Motorola mba hanehoana ny fomba fanaovan-javatra rehefa te hahomby amin'ny tsena toa mitaky sy mifaninana toy ny Android ianao, izay mora kokoa ny manadino azy. Ireto ambany ireto ny pitsipitsony.
5-inch IPS efijery HD vahaolana ary Gorilla Glass 3
Qualcomm Snapdragon 410 quad-core puce 1.4 GHz
2470 mAh bateria tsy azo ovaina
8GB / 16GB ao anaty fahatsiarovana azo aorina amin'ny alàlan'ny microSD ka hatramin'ny 128GB
Fakan-tsary aoriana 13MP miaraka amina flash LED, HDR, f / 2.0, 1080p 30fps horonan-tsary.
Fakan-tsary 5MP f / 2.2 eo aloha
Fanoherana ny rano IPX7
Milanja: 155 grama
Refy: 142,1 x 72,4 x 6,1
Matevina: 11,6 mm
Trano azo takalo
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Motorola » Motorola dia manolotra ny efijery Moto G 2015: 5 ″, fakan-tsary Snapdragon 410 ary 13MP
Kilian dia hoy izy:
nokasihin'izy ireo tamin'ny processeur fa tsy maninona.
Valiny amin'i Kilian
Edgar Tapia R. dia hoy izy:
Valiny tamin'i Edgar Tapia R
Emilio Crespo dia hoy izy:
Garcia izy ireo
Valiny tamin'i Emilio Crespo
Fetsy Chrome sy Tutorials Chrome OS- Fizarana 2